Iji myMail dị ka onye na-azụ ahịa ozi na iOS na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
myMail bụ ngwa magburu onwe ya ị nwere ike ibudata ma wụnye na ngwaọrụ mkpanaka gị, ịbụ dakọtara na ma iOS na gam akporo akaụntụ email; N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Gmail (na gam akporo) nwere arụzigharị zuru oke ma rụọ ọrụ nke ọma ma a bịa n'ịlele ozi ịntanetị anyị, ihe MyMail ga-enye anyị bụ ihe kachasị mma, ha niile nwere ezigbo mma ma dịkwa mma, akụkụ nke nwere ike ịbụ họọrọ site na ọtụtụ ndị mmadụ na ndị a mobile ngwaọrụ.
Iji nwee ike ịnwe ngwaọrụ a, naanị ị ga-aga ụlọ ahịa dị iche iche (na Google Play ma ọ bụ na Storelọ Ahịa Apple), ọ bụghị ọrụ siri ike kpamkpam ị ga-arụ, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-etinye aha ya na nwoke search engine na-enwe ike inwe Ozi m na ngwaọrụ mkpanaka anyị.
1 Installwụnye myMail na ọnọdụ gam akporo
2 Tọlite ​​Gmail na ozi ịntanetị m
3 Ọrụ pụrụ iche maka ijikwa interface myMail
Installwụnye myMail na ọnọdụ gam akporo
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ kpamkpam gbasara ịnweta ngwa na ụlọ ahịa gam akporo ma ọ bụ nke iOS dị iche iche, mgbe ahụ anyị ga-ekwu n'ụzọ doro anya ihe ị ga-eme iji chọta ma wụnye ngwa ọrụ a, n'agbanyeghị na anyị ga-eji ya dị ka isi ihe atụ gam akporo.
Anyị na-amalite sistemụ arụmọrụ anyị gam akporo.
Site na desktọọpụ anyị pịa Google Play.
Na ọchụchọ dee anyị Ozi m.
Site na nsonaazụ anyị na-ahọrọ ngwá ọrụ anyị Ozi m na ekemende, "Wụnye".
Anyị na-aga na desktọọpụ wee pịa akara ngosi ahụ Ozi m.
Ndị a bụ naanị usoro anyị kwesịrị iji wụnye Ozi m, ọ bụ ezie na maka oge anyị kwuru maka gam akporo sistemụ; mgbe anyị na-agba ọsọ a ngwa, anyị ga-ahụ na nke mbụ ya na windo ngosi,, ebe anyi kwesiri ịhọrọ oru nke anyi choro hazie n'ime onye ahia a:
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ email ọzọ, ị ga-ahọrọ nhọrọ "Ozi ndị ọzọ", agbanyeghị na nke a pụtara ịnwe ụfọdụ nhazi ahaziri iche; Iji gaa n’ihu n’ihe atụ anyị, anyị ga-ahọrọ nnabata email Gmail anyị.
Tọ ntọala Gmail na Ozi m
Site na nhọrọ na ngosi ngosi nke pụtara na mbụ, naanị anyị ga-ahọrọ ọrụ Google (maka ozi Gmail), na-etinye nzere nnweta nnabata nke akaụntụ anyị.
Window na-esote anyị ga-ahụ bụ naanị ihe mmụta, n'ihi na ebe ahụ Ozi m Ọ ga-agwa anyị ihe ùgwù ọ ga-enwe na akaụntụ email anyị; dịka ọmụmaatụ, n’ebe ahụ a ga-egosi na ngwa ọrụ nwere ike ijikwa ozi ịntanetị anyị n’etiti nhọrọ ole na ole ndị ọzọ.
Ọrụ pụrụ iche maka ijikwa interface Ozi m
Ihe anyị kwurula ugbu a ka enwere ike ịtụle dị ka ọrụ mmebe nke isi na-adọta ndị mmadụ anaghị adọta ọtụtụ anya; ihe dị ezigbo mkpa bụ ozugbo anyị banyere iji lelee ozi anyị n'ime akaụntụ email Gmail (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ anyị mejuputara na ọrụ ahụ). Iji mkpịsị aka anyị na ihuenyo mmetụ n'akụkụ dị iche iche nke ihuenyo anyị ga-enweta ọrụ ole na ole pụrụ iche, ndị a bụ:
Mia mkpịsị aka anyị were were metọọ ihuenyo ahụ. Nke a ga - eme ka ozi-e rutere ọhụrụ imelite na igbe igbe.
Mia mkpịsị aka anyị were were were wepụta ihuenyo ahụ n’aka ekpe. Ọ bụrụ na anyị etinye mkpịsị aka anyị n'aka nri aka nri wee pịgharịa aka na aka ekpe anyị, akara ngosi ole na ole ga - apụta, nke ga - ekwe ka: kaa dị ka agụghị akwụkwọ, pụta ìhè, zaghachi ozi ahụ, zipu ozi ma ọ bụ ziga ya na igwe .
Swipe ihuenyo n'aka nri anyị. Ọ bụrụ na anyị tinye mkpịsị aka anyị n'akụkụ aka ekpe ma site n'ebe ahụ, anyị na-amị na ihuenyo ahụ n'aka nri, nchekwa ma ọ bụ aha mmado anyị mepụtara na akaụntụ email anyị ga-apụta.
Na nke ikpeazụ a gburugburu ebe obibi nke anyị nọrọ, anyị nwekwara ike-enwe mmasị a ole na ole ọcha dị kwupụta na nsọtụ aka ekpe nke ihuenyo; Ebe ahụ akara "+" na-ezo aka n'itinye akaụntụ email ọzọ na ọrụ nke Ozi m (nke nwere ike ịbụ Yahoo, AOL ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ), enwekwara obere gia na-aga n'akụkụ ala, nke ga-enyere anyị aka ịbanye nhazi nke ngwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » MyMail, onye ahia email magburu onwe ya maka gam akporo na iOS